Lynnhaven Inlet Maintenance Dredging, Fandinihana momba ny raharaha fanodinana
Lynnhaven Inlet Channel Navigation Federal dia azo navandrihana Taorian'ny tetik'asa fanondranana vola 2 tapitrisa
Febroary 1, 2014
Ny Distrika Norfolk, VA, ao amin'ny Corps of Engineers amerikanina dia nanambara fa ny Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel dia mivezivezy tanteraka amin'ny alàlan'ny tetik'asa fanodinana fanodinana $ 2 tapitrisa hanesorana ny fepetra fisolokiana mafy nataon'i Hurricane Sandy ao amin'ny 2012.
Ny Corps dia nanao fifanarahana tamin'ny tetikasa Southwind Construction Corporation, izay tonga mialoha ny fandaharam-potoana sy ao anatin'ny teti-bola, hoy i Andy Reid, solontenan'ny biraon'ny kaontran'ny Norfolk. Southwind dia nampiasa ny «dredge cutter» 16 ″ Ellicott Series 970, sary etsy ambony, hanatanterahana ilay asa.
Ny fitrandrahana fikojakojana dia nahitana fampiasa indray ary fametrahana fasika sahabo ho 112,000 metatra toradroa amin'ny morontsiraka 6,500 XNUMX metatra, manomboka amin'ny Lynnhaven Inlet ka hatrany amin'ny manodidina akaiky ny Chic's Beach ao Virginia Beach, VA, akaikin'ny vavan'ny Chesapeake Bay. "Ny tanànan'i Virginia Beach dia tena faly tamin'ny zava-bitan'ny Distrikan'i Norfolk tamin'ity fifanarahana ity," hoy i Phill Roehrs, PE, injenieran'ny loharano ao Virginia Beach. “Ny lalan-drano lehibe nanompo ny tavy dia nadio tamin'ny fihorakorahana rehetra, ary ny fasika nesorina tamin'ny fantsona dia napetraka teo amin'ny moron-dranomasina erosialy mba hamenoana. Io no tsara indrindra amin'ny tontolo roa. ”
Lynnhaven Inlet isan-taona dia manao fitrandrahana fikolokoloana hiadiana amin'ny kiakiaka fanakianana. Na izany aza, noho ny fiantraikan'ny Rivo-doza Sandy teo amoron'ny morontsiraka Virginia Beach, niharatsy ny fiantsoantsoana ary nitaky fanodinana haingana, hoy i Kristin Mazur, mpitantana ny tetikasan'ny Distrikan'i Norfolk.
"Ny fanadihadiana dia namantatra ny fikiakiahana mafy tao amin'ny fantsona fidirana, ny fitodihan'ny basin ary ny fantsom-pitaovan'ilay tetikasa," hoy i Mazur. "Ity tabataba ity, raha avela irery, dia mety hisy fiatraikany amin'ny indostrialy an-dranomasina isan-karazany, ary nandrahona ny fitetezana azo antoka sy mahomby."
Ny tetik'asa matetika dia mitaky fihodinana feno fanodinana feno hatrany isaky ny telo taona, ka manome fidirana ao amin'ny Chesapeake Bay sy Atlantika Atlantika ho an'ny sambo fanjonoana ara-barotra, sambo mpanarato, sambo amin'ny lohany ary sambo isan-karazany fialamboly. Ny fantsona dia ampiasain'ny sambo mpanamory fiaramanidina fiaramanidina Virginia sy Maryland izay mifototra ao anaty anaty sambo mba hitaterana ny mpanamory fiaramanidina avy any amin'ny lalàn'izy ireo mankany amin'ny sambo midina miditra ao amin'ny Chesapeake Bay avy any Atlantika.
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetik'asa fikojakojana ny fantsona